အီတလီအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
ဒေါသအီတလီသို့သော်အီတလီအစိုးရလောင်းကစားဝိုင်းအချို့ပုံစံများကိုတရားဝင်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာ ယူ. , လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အန္တရာယ်သူတို့ရဲ့မေတ္တာသည်ကျော်ကြားသောဖြစ်ကြသည်။ ဒီဧရိယာဖို့တင်းကျပ်သောသဘောထားကိုများအတွက်အကြောင်းရင်း 90 ရဲ့အတွင်းလူဦးရေအများစုဖျော်ဖြေရေး၏ဤမျိုးကိုအတည်မပြုကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီမာဖီးယားနဲ့ဆက်စပ်အများအပြားလောင်းကစားဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအရာပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီးမကြာသေးမီကဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းတိုင်းပြည်လောင်းကစားဝိုင်း၏ကျော်ကြားမှုအတွက်လျင်မြန်စွာကြီးထွားမမြင်စဖူး။
အီတလီမှာလောင်းကစားဝိုင်း၏လက်ရှိမော်ဒယ်ပြည်ပမှာပိုက်ဆံအီတလီကစားသမားလွှဲတားဆီးရည်ရွယ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစား directory ကိုမှဧည့်သည်များအဘို့သတိပြုပါ။ "ကြားဖြတ်" ပြည်ပမှာကစားရန်ထွက်ခွာကြသူဒေသခံတွေ, နိုင်ရန်အတွက်, ရှိသမျှလောင်းကစားရုံနိုင်ငံများတွင်အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်များနှင့်အတူအနီးကပ်နယ်စပ်မှတည်ရှိနေကြသည်။
2007 ခုနှစ်တွင်, အီတလီ, နောက်ဆုံးပေါ်အာဏာနှင့်တရားဝင်လောင်းကစား၏အခြားအမျိုးအစားများကိုကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်လက်ရာလက်အပေါ်အခြေခံတရားဝင်ကဒ်ဂိမ်းများကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အီတလီမှာလောင်းကစားဝိုင်းကိုထိန်းညှိဖို့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကခန္ဓာကိုယ်လိုင်စင်၏ကြီးကြပ်မှုနှင့်ထုတ်ပေးရေးအတွက်စေ့စပ်သော AAMS (Amministrazione Autonoma dei လက်ဝါးကြီးအုပ် di Stato) ဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေကိုချိုးဖောက်များအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ် - ဒဏ်ငွေကနေထောင်ဒဏ်ရန်။
ထိပ်တန်း 10 အီတလီအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
အီတလီနိုင်ငံရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည်။ အမျိုးမျိုးသောစစ်တမ်းများအရ, အွန်လိုင်းလောင်းကစားဖျော်ဖြေရေးအီတလီ၏အကျော်ကြားဆုံးပုံစံများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အီတလီနိုင်ငံရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားကနေဝင်ငွေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ အီတလီနိုင်ငံရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏ဆိုဒ်များနှစ်ဦးစလုံးနှင့်နိုင်ငံခြားလောင်းကစားဝိုင်းက်ဘ်ဆိုက်များမှပွင့်လင်း access ကိုယနေ့အထိ, အီတလီကစားသမား။ သို့သော်အာဏာပိုင်များနီးကပ်စွာ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်။ အီတလီနိုင်ငံရှိအွန်လိုင်းလောင်းကစားအပေါ်ဥပဒေအရတိုင်းပြည်အနှံ့သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏ပြဌာန်းချက်အဘို့, အားလုံးအော်ပရေတာတစ်ဦးကိုအထူးလိုင်စင်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဤမူဝါဒမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အီတလီဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းပေါက်, ဖွံ့ဖြိုးနှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပိုမိုအမြတ်အစွန်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာသည်။
အီတလီနိုင်ငံကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်အီတလီကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
CasinoToplists ခရီးဆက်ပြီးနှင့်ဤအချိန်ကျနော်တို့ကစကားလုံး "လောင်းကစားရုံ" ၏အိမ်တွင်ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ် - နေသာအီတလီမှာ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကို "အိမျ" ရဲ့ - သမိုင်းကြောင်းလောင်းကစားအီတလီပေမယ့်, "လောင်းကစားရုံ" ဟုခေါ်သည်။
အီတလီ - အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာပထဝီနဲ့သမိုင်း;
ပစ္စုပ္ပန်နေ့ 1919 ကနေသမိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းမှသမိုင်းသဘောထားကို;
တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်အပေါ်5ကာစီနိုလောင်းကစားရုံရှိပါတယ်;
အီတလီသမ္မတနိုင်ငံ - ဟောငျးကမ္ဘာ့ဖလား, ယဉ်ကျေးမှုနှင့် open-လေကြောင်းပြတိုက်၏ပုခက်တစ်ခုဖော်ရွေထောင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်သည်သူ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့အမည် Cypriot အိမ်နီးချင်းများထံမှလက်ခံရရှိခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကအလွန် prosaic - ထိုနွားသငယ်၏တိုင်းပြည်။
ဒါကအချိန်ကြာမြင့်စွာကနွားကိုလူများတို့သင်္ကေတကြီးဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, မကြာခဏရောမသူမ-ဝံပုလွေ butting ပုံဖော်။
အီတလီ၏မြို့တော် - များစွာသောလူအဘို့စစ် တိုက်. သူကိုရောမမြို့ရောမအင်ပါယာ, ထာဝရမြို့အထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးသို့နစ်မြုပ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့, နှလုံး, ။ ဒီနေ့သန်း4ကျော်လူများ, ဧည့်သည်တွေအများကြီးမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ရောမမြို့သဘောကောင်းဧည့်သည်များရှိပါသည်, တစ်ဦးကိုအမှန်တကယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်လာသူတို့ကိုပျော်စရာတွေအများကြီးပူဇော်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အရေအတွက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဧရိယာ၏တရားဝင်သွားဖို့ရှိသည်, ကစားရန်လောင်းကစားဝိုင်းဂိမ်းမပါဝင်ပါဘူး။ အဆိုပါဧည့်သည်များကစားတဲ့, Punto Banco, Blackjack နှင့်ဂိမ်းများသုံးဆယ်သို့မဟုတ်လေးဆယ်, ကင်လုပ်ခိုင်း, Chemin က de Fer နှင့်လူတိုင်း၏အနှစ်သက်ဆုံး, ဖဲချပ်မှမရရှိနိုင်ရှိပါသည်။
ရဲတိုက်, ရဲတိုက်, တံတား, ဘုံဗိမာန်, စားသောက်ဆိုင်များ, စပျစ်ဥယျာဉ်, ရုပ်ရှင်ရုံ, ပြတိုက်နှင့်များစွာသောပိုပြီးရုံအံ့သြဖွယ်: ဖြစ်ကောင်းရှိသောကြောင့်, အ, ဆွဲဆောင်မှု၏ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှုများထဲမှရုံလောင်းကစားရုံများအတွက်အီတလီကိုသွားမယ့် sacrilege ပါလိမ့်မယ်။
အီတလီယခုအထိနိုင်ငံတော်အဆင့်မှာအလွန်မဆင်မခြင်ဖြစ်သော်လည်းလောင်းကစားအိမ်များ, Salon, ပုဂ္ဂလိကကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်အထိုင်စက်တည်းဟူသောခန်းမဖွင့်လှစ်ခြင်းကိုမပြုရပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အီတလီအတွက်အများအပြားလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါတယ်။
လောင်းကစားများနှင့်အီတလီရာစုနှစ်များစွာရပ်တည်ရန်, ပူလူများနှင့်ကစားရန်ချစ်သောသူ, ဒါပေမယ့်ကက်သလစ်ဘာသာကဒီ pastime တစ်အနုတ်လက္ခဏာသဘောထားကိုရှိပါတယ်။ သူကအမျိုးသားရေးအကျိုးစီးပွားခုခံကာကွယ်ဖို့စတင်နိုင်အောင်အာဏာပိုင်များတစ်ဦးအပေးအယူများနှင့်တရားဝင်အပြစ်တရားတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။
အစိုးရ, လုံးဝမလိုလားသောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ၏လောင်းကစားဝိုင်းအိမ်များတွင်ပိုက်ဆံလိမ့်မည်ထွက်သွားသည်ပိတ်ပင်ထားမှုလုံးဝလောင်းကစားလျှင်ကောင်းစွာသတိပြုမိသည်။ ထို့ကြောင့်, ဆလိုဗေးနီးနှင့်အတူနယ်စပ်ပေါ်တွင်ဘတ်ဂျက် replenish မှကစားသမားများ၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာမှ, ပြင်သစ်, ဆွစ်ဇာလန်နှင့် Monte Carlo အတော်ကြာကာစီနိုလောင်းကစားရုံလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အီတလီမှာစုစုပေါင်း5ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလည်ပတ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတယောက်မျှမကျန်ရောမမြို့မှာရှိတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကြီးကျယ်သော စန်း Remo အတွက်လောင်းကစားရုံ မိုနာကိုသို့မဟုတ်ပြင်သစ်တွင်ကစားရန်လိုသောကြားဖြတ်ဖမ်းယူ, Campione အတွက် azino မှ Lugano ၏ကမ်းပေါ်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အတူနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်, စန်းဗင်းဆင့်အတွက်လောင်းကစားရုံ Mont Blanc ၏ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖို့ထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းပိတ်။ တစ်ဦးက ဗင်းနစ်အတွက်2သောနေရာများ လူတွေလိုဗေးနီးယားမှာရှိတဲ့လောင်းကစားသွားကြဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လောင်းကစားဝိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားမတိုင်မီဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်သာနှစ်ဆယ်ရာစုအတွက်, အီတလီ, ဒါကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ဒဏ္ဍာရီဘာသာစကား Venetian လောင်းကစားရုံ "Ridotto" နျြရစျ။
ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အစိုးရက 59 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ 1919 ကတည်းကလောင်းကစားအပေါ်တစ်ဦးတင်းကျပ်ပိတ်ပင်မှု operating စတင်ပိတ်လိုက်တယ်။ သို့သော်ဆိုလီနီပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောမူဝါဒ၏ထိခိုက်မှုနားလည်သဘောပေါက်ဒါ 1927 အတွက်တရားဝင်စန်း Remo အတွက်လောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်။
ကာစီနိုစန်း Remo Eugene ပြပေးနေဖြင့် 1905 အတွက်ဒီဇိုင်း, တစ်ဦးခမ်းနားအိမ်ကြီးတွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာစည်ပင်သာယာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်တည်ရှိသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကအီတလီမှာတစ်ခုတည်းသောလောင်းကစားအိမ်သူအိမ်သားဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုအရပ်သူ, သာစိုးမိုးရေး၏အတည်ပြုချက်ကိုအဖြစ်ဆိုလီနီသည်နှင့်အညီ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုအီတလီလှုပ်ရှားမှု 1933 အတွက်ကာစီနို Campione d'italia ဖွင့်လှစ်သောအချက်ကိုမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်း၏သူ့ရဲ့အချိန်ပုံမှန်အထူးတပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း, နှင့်အတူ 1917 အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုယနေ့ဥရောပအတွက်အကြီးမားဆုံးလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့အနာဂတ်အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။
1937 ခုနှစ်, ဥပဒေများကိုဗင်းနစ်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံခွင့်ပြုခဲ့သည်ပေမယ့်ဒီမှာစည်ပင်သာယာ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိပါသည်တစ်နည်းနည်းပျော့ပျောင်းခဲ့ကြသည်။
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကအဲလ်ပ်တောင်တန်းမြင့်စန်းဗင်းဆင့်အတွက် 4th လောင်းကစားရုံများရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဆန္ဒခံယူပွဲအားဖြင့် 1947 အတွက်ပြင်သစ်နယ်မြေမှမိမိတို့ကိုယ်ကို attach လိုကြောင်း, ပြင်သစ်နှင့်အီတလီ၏လိမ်ယှက်ယဉ်ကျေးမှုဒါတင်းကျပ်စွာရှိပါတယ်ရှိရာ Valle d'Aosta ဒေသတွင်တည်ရှိသည်။ စန်းဗင်းဆင့်များတွင်နေထိုင်သူများကလောင်းကစားရုံ၌ထင်ရှားလိမ့်မည်သည့်အခါသူတို့အီတလီမှာကျန်ကြွင်းသောရောမမြို့ခွအေနအေထားတော်မူ၏။ ထိုသို့မြန်နှုန်းဖွင့်လှစ်။
ဒါပေမယ့်အီတလီလောင်းကစားရုံများ၏လှုပ်ရှားမှုများများ၏သမိုင်း, ပင်စည်ပင်သာယာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်မှာမှောင်မိုက်အချိန်လေးအများကြီးသိတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောန်ထမ်းများနှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုန်ထမ်းများ၏လိမ်လည်မှုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုအ 1983 အတွက်ပင်မာဖီးယားဂိုဏ်းနှင့်အတူတစ်ဦးလောင်းကစားရုံစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် Sanremo လင့်များဖမ်းမိ။ ဒီခက်ခဲတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း restructured နှင့်ပြောင်းလဲဦးတည်ချက်ပြီးနောက်။
ယနေ့ Apennine ကျွန်းဆွယ်၌5ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလည်ပတ်, သူတို့သည်ဆဲမြူနီစီပယ်ကြသည်, ထိုဒေသများ slot ကစက်တွေ, 70% ကနေအမြတ်အစွန်းများ 50% တစ်ခုဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါပေါင်းလဒ်၏ဘတ်ဂျက်အထောက်အကူပြု - အမေရိကန်ဂိမ်းများ, 45% ကနေ - မှ ပြင်သစ်။
အီတလီအစိုးရကလောင်းကစားရုံလိုက်လျောဖို့မသွားပေမဲ့, 2010 အတွက်အီတလီအွန်လိုင်းဖဲချပ်ခန်းထဲမှာဆော့ကစားနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ထိုသို့သောကယ်ဆယ်ရေးဘတ်ဂျက်အတွက်လက်ခံရရှိအခွန်ဘီလီယံပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ပေးခဲ့သည်။
အီတလီမှာအနည်းငယ်သာလောင်းကစားရုံသော်လည်း, ထူးခြားတဲ့ဘာလဲ, သူတို့မှာအားလုံးပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်မြို့တော်အဲဒီအရပ်တို့ကိုမှတ်တိုင်နှင့်ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုတစျမြိုးဖြစ်လာကြပါပြီ။ ခမ်းနားအတွင်းပိုင်းနှင့်အတူဇိမ်ခံ Villas ရှည်လျားလူမှုရေးဖြစ်ရပ်များ, အကြီးစားအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ရပ်များများအတွက်နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။
Coliseum ။ နေရပ်လိပ်စာ: Piazza del Colosseo, 1 ။ ဒါဟာရှေးရောမမြို့, အီတလီမြို့တော်တစ်ခုအမာခံများဖြစ်သောအရှိဆုံးအံ့မခန်းရှေးဟောင်းအဆောက်အဦ၏သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
Trevi ရေပန်း။ နေရပ်လိပ်စာ: Piazza di Trevi ။ ဂုဏ်အသရေနှင့် grandeur ထိခိုက် Nicola Salvi ကဒီဇိုင်းအတွက် XVIII ရာစု၏ခမ်းနား Baroque စမ်းရေတွင်း, နီးပါး 26 မီတာ၏ Trevi ဧရိယာအထက်တာဝါတိုင်။
Pantheon ။ နေရပ်လိပ်စာ: Piazza della Rotonda ။ အပြင်ပန်းနှင့်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်သပိတ်မှောက်ရောမဗိသုကာ၏အကောင်းဆုံးဥပမာ။
ရောမဖိုရမ်တစ်ခု။ နေရပ်လိပ်စာ: မှတစ်ဆင့် della Salaria Vecchia,5/6။ ရှေးခေတ်ရောမမြို့၏လူမှုရေးအသက်တာ၏ Center ကလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်၏ဘဝအသက်တာသို့တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်။
စိန့်ပေါလုရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း။ နေရပ်လိပ်စာ: Piazza စန်း Pietro ။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဗာတီကန်၏အများဆုံးအထင်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာဖြစ်ပါတယ်။
အီတလီ - ဥရောပမှာရှိတဲ့လူဦးရေအများဆုံးပြည်နယ်။
လူဦးရေရဲ့ 98% - ကက်သလစ်။
အီတလီ - တစ်ဝက်ကမ္ဘာကျော်ဒိန်ခဲ၏မွေးရပ်မြေ။
ဗာတီကန်နှင့် San Morino: အီတလီမှာနှစ်ခုထောင်ပြီးပြည်နယ်များရှိပါတယ်။
ခေတ်သစ်အီတလီ - Dante ကျေးဇူးတင်ခေတ်စားလာခဲ့သည့်တစ်ဦး Florentine စကား။
0.1 ထိပ်တန်း 10 အီတလီအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
Grande Vegas လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေကုဒ်မျှသိုက်